Akhri taariikhda RW cusub ee Soomaaliya (Cumar Cabdirashiid) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Akhri taariikhda RW cusub ee Soomaaliya (Cumar Cabdirashiid) * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri taariikhda RW cusub ee Soomaaliya (Cumar Cabdirashiid)
By A warsame on 17th December 2014
Taariiikh kooban oo ku saabsan raysalwasaaraha cusub
Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Maraykanka, ka hor inta aan mar kale loo magacaabin Raysalöwasaaraha Soomaaliya.
waana safiirkii u horeeyey muddo 20 sano ah kadib Soomaaliya u fariista dalka Maraykanka, waxaana warqadaha aqoonsiga ka guddoomey Madaxweyne barack Obama 14 Luuliyo 2014.
Ambassador Sharmarke waxa uu dhashey 18 Juun 1960, maalmo ka hor markii Soomaaliya xoriyadda qaadatey, waxaana uu la kowsadey Soomaaliya oo gob ah.
Ambassador Sharmarke waxa uu ka soo jeeedaa qoys caan ah, Awoowihiis Cali Sharmarke waxa uu ahaa nin si weyn looga yaqaaney meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaaliga looga hadlo, waxa uuna ahaa gabyaa iyo aftahan waxyaabo badan lagu xasuusto. Aabihiis Cabdirashiid Cali Sharmarke waa Raysalwasaarihii u horeeyey ee Soomaaliya, kadib xornimada, kadibna noqdey Madaxweynaha Soomaaliya 1967, waxaana la diley isaga oo xilka haya 15 Oktober 1969, dilkaas oo looogu gogolxaarey in ciidamadu dalka qabsasdaan.
Cumar Cabdirashiid hooyadiis waa Ruqiya Macalin Daahir oo ka soo jeeda qoys caan ah ahaydna aqoonyahan.
Ambassador Cumar Cabdirashiid Cali waxa u waxbarashada ka bilaabey magalada Muqdisho taas oo uu ka gaarey heer jamaacadeed, waxaana uu ka qalinjebiyey jaamacadii Umadda Soomaaliyeed ee Gahayr isaga oo bartey cilmiga dhaqaalaha.
Waxbarashadiisa sare ayuu ku qaatey dalka Kanada, waxaana uu ka baxay Carleton University magaalada Ottawa, halkaas oo uu ka qaatey Cilmiga Siyaasadda shahaahada B.A, kadibna M.A ayuu ku qaatey Siyaasadda dhaqaalaha.
Xirfadiisi shaqo ee u horeysey waxa uu ka qabtey Bangigii Soomaaliya iyo shirkaddii Coca-Cola, kadib waxa uu u wareegey hay’adaha aan dowliga ahayn sida Centre for Peace and Development Initiatives ee dalka Kanada.
Sharmarke waxa uu sanadkii 2000 ka shaqo bilaabey Qaramada Midoobey, dalalka Sri Lanka, Sierra Leone iyo Sudan, halkaas o uu ka ahaa la taliye siyaasadeed. Sidoo kale waxa uu la taliye siyaasadeed u ahaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yusuf Axmed (AUN) sanadkii 2008.
13 Febraayo 2009 ayaa Madaxweyne Shariif Shiikh Axmed kaga dhawaaqey dalka Jabuuti in uu Raysalwasaaraha Soomaaliya u doortey Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke, Baarlamaankii Soomaliya oo markaas fadhigiisu ahaa dalka Jabuuti tiradiisuna gaareysey 550 Xildhibaan ayaa ansixiyey.
Xilliga Sharmarke loo magacaabey raysalwasaarha waxay ahayd xilli kala wareeg ah, Waxaana kala miirmayey kooxihii ku mideysnaa wixii loogu yeeri jirey Muqaawamo ee looga soo horjeedey madaxweyne Cabdullaahi Yusuf, waxaana durbadiiba soo baxay in Muqdisho laba u qaybsanto inta badana ay gacanta ku dhigaan labadii urur ee Xisbul Islaam iyo al-Shabaab, sidoo kale dalka waxaa ka taagnaa Burcadbadeeda oo caalamka dhan si weyn uga qayliyey, waxaa la dhihi karaa Dowladda waxaa markaas gacanta ugu jirey aqalka Villa Somalia, Dekadda, garoonka diyaaradaha iyo wadda isku xirta, waxaana intaas gacanta ku hayey AMISOM oo markaas Mandate-koodu ahaa ilaalin iyo is difaacid oo aan loo oggoleyn in ay qaadaan dagaal.
Bishii May 2010 waxaa soo baxay khilaaf u dhexeeya Madaxweyne Shiikh Shariif iyo Raysalwasaarihiisi Cumar Cabdirashiid, sidoo kale waxaa khilaafka baal socdey mid la doonaayey in xilka looga qaado Afhayeenkii Baarlamaanka ee xilligaas Sheekh Adan Madoobe.
Shiikh Adan Madoobe ayaa 16 May 2010 ku dhawaaqey in xukuumaddii dhacdey Madaxweynahana laga doonaayo in uu soo magacaabo Raysalwasaare cusub, inkasta oo codeynta dhacdey ay ahayd mid isaga ka dhan ah oo xilka looga qaadayey, waxana kusime ay u doorteen Xaaji Shukri Sh. Axmed, taas oo markii danbe ku khasabtey in uu is casilo Adan Madoobe Bishii Juun, laguna qanciyey xukuumadda in Wasiir laga siiyo waxaana xilka la wareegay markale Shariif Xasan Shiikh Adam.
Shiikh Shariif ayaa isaguna sheegey in uu aqlbaley arrintaas Raysalwasaare cusubna soo magacaabayo, waxaana ganafka ku dhuftey Raysalwasaare Sharmarke, taas oo xujo ku noqotey Shiikh Shariif markii danbe kadib markii la ogaadey in go’aanku ahaa mid ku kooban Shiikh Adan Madoobe ee aysan jirin Baarlamaan kalsoonida kala laabatey Xukuumadda, taas oo ku khsabtey in Madaxweyne Shiikh Shariif ka noqdo go’aankiisi.
Si kastaba ha ahaatee wax khilaafku soo jiitamo, xoogiisuna uu ka taagnaa dastuurkii qabyada ahaa, waxaana Cumar Cabdirashiid taagnaa hindise ah in Soomaaliya laga saaro Dowlad danbe oo kumeelgaar ah (Akhri) waxaa xilka iska casiley 21 Sebtember Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke, waxaana uu fursad siiyey Madaxweyne Shariif in uu soo magacaabo Raysalwasaare cusub.
maanta oo taariikhdu tahay 17 Diseember 2014 ayaa mar kale loo magacaabey raysalwasaaraha Soomaaliya.
Ugu danbeyntii Ambassador Sharmarke waa xaas leh saddex caruur ah.